Miady maraina, tsara hariva; miady hariva, tsara maraina : toy ny adin’ ankizy. [Cousins 1885]
Proverbe Andevolahy be lamosina, ka tsy mifidy zaza hobabena. [Veyrières 1913 #503, Cousins 1885 #173]
Andevolahy latsaka avara-patana: saro-miala. [Cousins 1885 #178]
Saro-miala, toy ny andevolahy latsaka avara-patana. [Cousins 1885 #2866]
Proverbe Andevolahy mampirafy: intelo mihosina ampombo. [Cousins 1885 #182]
Andevolahy mampirafy, manita-draharaha. [Houlder 1895 #1539, Cousins 1885]
Proverbe Andevolahy manao jirik' olona : tsy misoroka ny razana iombonana. [Veyrières 1913 #518, Cousins 1885 #186]
Andevolahy mielo: manakona ny anjara-masoandrony. [Cousins 1885 #188]
Proverbe Aza atao mitsoaka an-tonony, tahaka ny tohy rofian’ ny ankizy. [Cousins 1885 #362]
Aza saro-po manan' anaka, fandrao tsy manan-dray ny ankizy. [Cousins 1885 #707, Veyrières 1913]
Aza saro-po manan' anaka, fandrao tsy manan--dray ny zaza. [Cousins 1885 #707, Veyrières 1913]
Proverbe Aza manao andevolahy mahay valiha : asai-manao, tsy mety; nony tsy irahina, manao. [Cousins 1885 #417]
Aza manao tanin’ andron’ andevolahy: ny kibo no atanina andro. [Cousins 1885 #511]
Vorona azon’ adala: na tsy maty aza, mifohafoha volo. [Rinara 1974 #5038, Cousins 1885 #3742]
Aza miadaladala, toy ny zaza voky sabora. [Veyrières 1913 #2069, Cousins 1885 #598]
Proverbe Aza mikapa sakaiza hoatry ny andevolahy homana-tain-jiro. [Veyrières 1913 #546]
Aza mikapa sakaiza ohatra ny andevolahy homana-tain-jiro. [Houlder 1895]
Aza mikapa sakaiza, ohatra ny andevolahikely homana-tainjiro. [Cousins 1885]
Aza mikapa sakaiza ohatra ny ankizilahy homana-tain-jiro. [Rinara 1974 #771]
Lehilahy mahery mihosy, vehivavy mateti-panetsa : manao ny hahavoky ny ankizy. [Veyrières 1913 #1283, Cousins 1885 #1363]
Maina tsy azo diasana, ohatra ny fia-parin’ an-devolahy. [Cousins 1885, Houlder 1895]
Proverbe Maka kitay manana ankizy ; misorona afo manan-jiro ; homa-maizina ao am--pototry ny mazava. [Veyrières 1913 #2296, Houlder 1895]
Miadana ory, toy ny andevolahy homan-kerotra. [Veyrières 1913 #567, Cousins 1885 #1705]
Miangaly miserana, toy ny andevolahy misorona afo alozina. [Veyrières 1913 #569, Cousins 1885 #1716]
Miangaly miserana, toy ny andevolahy mizaha lanonana, kanefa raha tonga, maka kitay. [Cousins 1885 #1717]
Proverbe Mody amy ny laoniny, ohatra ny andevolahy verin-trosa. [Cousins 1885]
Proverbe Ny ankizy no manao tsingeringerina, ka ny lehibe no fanina. [Houlder 1895 #1924, Cousins 1885, Veyrières 1913]
Tsingeringerin’ ankizy: ny mijery avy no fanina. [Cousins 1885 #3315]
Ny zaza no tia tsapa fatana, ny ray aman-dreny no tia tono hanina. [Veyrières 1913 #992, Cousins 1885 #2534]
Ny lamokan’ atody akoho no tsy nomen’ ny vaventy ny ankizy, dia fanariana ny rariny. [Cousins 1885 #2298]
Ny saina toy ny hady : raha marivo loatra, itsambikinan' ny ankizy ; ary raha lalin-doatra, mamotraka ny tena. [Veyrières 1913 #6191, Cousins 1885 #2411, Nicol 1935]
Proverbe Tahaka ny katsaka: izay iainana misy ta-hanimba avokoa: maitso, hanin’ ondry; mibaby, ian-tsampazan’ ny alika; main-dambana, itomanian’ ny ankizy. [Cousins 1885 #2959]
Proverbe Toy ny andevolahy miandry faty : izay mahery vava ihany no amboninjato. [Veyrières 1913 #593, Cousins 1885]
Valabalaka, ohatra ny andevolahy homan-goaika. [Cousins 1885]
Proverbe Voangory voafatotr' ankizy : manidina ihany fa eny ho eny. [Veyrières 1913 #1545, Rinara 1974 #4989, Cousins 1885]